Gọọmenti Kano enyela ụmụ nwanyị dị puku ise na narị abụọ ọzụzụ pụrụ ịche
Gọọmenti Steeti Kano enyela ma kwado ụmụ nwanyị dị puku ise na narị abụọ n’ọnụ ọgụgụ,n’ebe dị ịche ịche, iji gbanwe ọnọdụ obibi ndụ ha. Onye ọbụla n’ime ụmụ nwanyị ndị ahụ nwetere ọzụzụ pụrụ ịche, ma ritegwa puku naira iri.
Aka na-achị Steeti Kano, bụ Dr. Umar Ganduje, nọrọ n’oge mmemme nke e mere n’ama egwuregwu Abacha Stadium na Kano kwuo na “e mere nke a maka iji nyere ụmụ nwanyị ahụ aka, mee ka ha kwụrụ na nke onwe ha, nwee ike ịkwalite ezi n’ụlọ ha.”
Ganduje kwukwere n’ọchịchị ya ga-ewube ọnọdụ akụ na ụba bụ ịgba, ma kwalitekwe ọnọdụ obibi ndụ ụmụ nwanyị. Ọ gbakwụnyere sị na e wepụtala ego dị nde naịra iri ise iji zụta ịhe ha mepụtara, nke a ga-eji nyere ndị gbara ọsọ agha Boko Haram na mpaghara North East nke ala Naịjirịa.
Ganduje kwukwere sị na e wepụtala ahịa ebe a ga-naere ngwa ahịa a rụpụtara na Steeti Kano.
Onye Kọmishọna na-ahụ maka ịhe banyere ụmụ nwanyị, bụ Yardada Maikano Bichi, kwuru na “ụmụ nwanyị a nwetere ọzụzụ pụrụ ịche dịka ịmepụta ude na ncha, ịkwa akwa, isi nri, na ihe ndị ọzọ.”
O kwuru na a ga-enyekwa ndị ọzọ ọzụzụ site n’amụma a, n’ọ dị n’ihu.